Benjamin Franklin: Nafta oo Laga Guulaysto Waa Hormoodka Guusha | Maankaab.com
Benjamin Franklin: Nafta oo Laga Guulaysto Waa Hormoodka Guusha
Nin la odhan jiray Mr. Benjamin Franklin oo ka mid ahaa raggii aasaasay dawladda Maraykanka (Founding Fathers of United States), isla markaana ahaa siyaasi, saynisyahan, ikhtiracaa, dibloomasi iyo qoraa. Waxa aynu soo qaadan doonaa isbeddel ugu yar ee uu noloshiisa ku sameeyey, gaadhsiiyeyna guusha weyn ee nololeed. Waxa uu qorshihiisa ku darsaday inuu habka uu u hadlo wax ka beddelo markii uu 12 jir ahaa, balse 13 jirkiisii buu bilaabay markii mid ka mid ah saaxiibadii u tilmaamay inuu kibir badan ku jiro. Sidaa darteed Franklin waxa uu go’aansaday inuu naftiisa ka daweeyo dhaliisha lagu sheegay.
“Xaataa waxa aan naftayda ka mamnuuca… isticmaalka kelmad kasta oo fikradaha xaddiidaysa (kibir sheegaysa) sida xaqiiqdii, shaki ku jirin iwm (Certainly, undoubtedly etc), waxaanan la qabatimay oo aan ku beddelay, waxaan tixgelinayaa, waxaan ka qabtay amma u malaynayaa) in shaygu sidaa yahay amma sida yahay; amma waxay iila muuqataa amma sidaasay hadda iila muuqato (I conceive, I apprehend or I imagine a think to be so or so; or it so appears to me at present)” ayuu yidhi Franklin.
Dabiiciyan shayga marka la bilaabo waa wax adag, sidaas oo kale Franklin bilawgii hore way ku adkaatay la qabatinka isbeddelka uu hadalkiisa ku sameeyo, balse aakhirkii waxay u noqotay wax aad ugu fudud. “Waxa ay noqotay shay igu fudud, caadana ii noqday, sidaa darteed 50 sanno ee u dambeeyey qofna igagamuu baxsan hadal qalafsanaan iyo kibirtoona.” Franklin waxa uu aaminsanaa in caadadan ahayd awoodda uu aragtida dadweynaha ku saamayn jirtay; “…waxa aan ahaa qof la-hadalka dadka ku xun, balse waan fahmay halka wax ka khaldanaayeen,” ayuu yidhi Franklin.
In qofka hal-shay oo ka duwan waxa uu qabto sameeyo waa waxyaabo ka mid ah guusha kuwa hor seeda. ‘Do one think different’ oo macnaheedu yahay qabo shay ka duwan, waa buug uu qoray mid ka mid ah khubarada dawaysa xannuunada nafsiga ah (Psychotherapist) oo la yidhaa Bill O’Hanlon, waxaannu aaminsan yahay in isbeddelka yare ee qofku sameeya uu guusha weyn hormood u yahay. Waxa ka mid ah qormooyinka buuggiisa ku qoran dhacdo yar oo ku saabsan gabadh la qabatintay isticmalka kiniin mandooriye ah iyo siday isaga daysay.
Sannadkii 1999, ayaa Dr. Bill waxa lagu casuumay barnaamijka caanka ah ee Oprah Winfrey Show. Gabadh daawatay barnaamijka uu ku jiray ayaa farriin Email ah u soo dirtay Bill, waxaanay waydiisatay bal inuu u sheego amma kula taliyo dhakhtar xannuunada maskaxda daweeya oo isagoo kale ah. Bill waxa uu u sheegay magacyada saddex dhakhtar oo degaankeeda laga heli karaayey. Gabadhii dib uma uu maqlin, farriin dambena kama uu helin Bill muddo dheer.
Muddo sannad ah kadib, ayaa Bill uu ka helay farriin Email ah haweenaydii. Waxa ay la xidhiidhay dhammaan dhakhaatiirtii uu u sheegay, balse waxay awooddi wayday lacagtooda. Sidaa darteed waxay go’aansatay in ay iyadu nafteeda dawayso oo ay qabato ‘wax ka duwan” waxay samayn jirtay.
Waxa ay maalin kasta qaadan jirtay 27 xabbo oo kiniin ah oo ahayd dhibta haysata ee ay dawada u raadinaysay. La-qabatinkeed wuxuu ahaa, aadna way ugu adkayd in hal xabbo oo kiniin ah ka dhigto markaba. Aakhirkii waxay go’aansatay oo ay qorshaysay in kiniin kasta ay badh ka jebiso. Waxa ay uu ahaa isbeddelka yar ee ay samaysay. Markii toddobaado ay sidaa ku wadday, waxa ay kiniin kasta ka sii jebisay in ka badan intii hore. Muddo toddoba bilood ah waxay ku guulaysatay in ay la-qabatinkii kiniinka daroogada joojiso.
Gabadhan waxa ay ku guulaysatay in ay guul ka gaadho wax dhibaayey iyo nafteeda, guushii waynaydna waa ay u soo hoyatay. Nafta oo laga guulaysta waa guul weyn.